Waa shaqsi Ceynkee ah Gudoomiyaha Maxkamadda Sare Dalka ee maanta uu magacaabay Madaxweynaha – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Waa shaqsi Ceynkee ah Gudoomiyaha Maxkamadda Sare Dalka ee maanta uu magacaabay Madaxweynaha
MAREEG 5 May 2016
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah u soo saaray wareegto uu xilka uga qaaday Guddoomiyihii Maxkamadda Sare ee Somalia Ceydiid Ilka-Xanaf.
Madaxweynaha ayaa guddoomiyaha cusub ee Maxkamadda sare ee dalka u magacaabay Dr. Ibraahim Iidle Suleymaan, oo isla maanta xilkiisa cusub loo dhaariyay.
Guddoomiyaha Cusub ayaa ka soo shaqeeyay Maxkamado ku yaalla deegaanada maamulka Soomaaliland ka hor inta aan xilkaani loo dhiibin.
Dr. Ibraahim Iidle Suleymaan, ayaa la sheegay in mudada u dhexeysa 2001 ilaa 2002 uu ahaa Qareen, isagoo sidoo kale sanadka marka uu ahaa 2002 ilaa 2005 noqday Gudoomiyaha Maxakamadda Sare ee gobolka Togdheer.
Dr. Ibraahim Iidle Suleymaan, waxa uu sanadkii 2005 ilaa 2006 noqday garsoore ka tirsan Maxakamadda Racfaanka ee Hargeysa.
Sidoo kale, sanadu marka ay aheyd 2006 ilaa 2011 waxa uu Dr. Ibraahim Iidle Suleymaan noqday Agaasimaha Qeybta Tababarada Madaniga ee Kulliyada sharciga Jaamacadda Hargeysa.
Sanadka marka uu ahaa 2011 ilaa xiliga aan ku jirno waxa uu ahaa Garyaqaanka Guud ee maamulka Soomaaliland.
Dr. Ibraahim Iidle Suleymaan, ayaa kasoo qalin jabiyay Jaamacada Caalamiga Khartoum ee dalka Sudan, isagoo sanada 1998 ilaa 1999 qaatay shahaadada Diploma Sare ee sharciga Jaamacadda Al-Nileyn Khartoum Sudan.
Madaxweyne Xassan Sheekh Maxamud oo ka hadlay xil kaqaadista Ceydiid Ilka Xanaf iyo Magacaabista Dr. Ibraahim Iidle Suleymaan, ayaa u sababeeyay Isbedel Siyaasadeed.